प्रधानमन्त्री ओलीले हटाएको तुइन युग अझै ज्युदै छ ! « Postpati – News For All
प्रधानमन्त्री ओलीले हटाएको तुइन युग अझै ज्युदै छ !
मङ्सिर २७, धादिङ । धादिङ चरौंदीका ९० वर्षीय सुकबहादुर चेपाङ ३० वर्षदेखि तुइनमा काम गर्दै आएका छन् । तुइनकै कमाइबाट अपांगता भएका एक छोराको पालनपोषण गर्दै आएका छन् । बाबुछोरा तुइनछेउमै रहेको पाटीमा बस्छन् ।
तुइनको घिर्नीले च्यापेर सुकबहादुरका हातका दशवटै औँला बांगिएका छन् । तैपनि, रोजगारीको सवाल भएकाले उनी पुल नबनोस् र तुइनमा काम गर्न पाइयोस् भन्नेमा छन् । पुल बने रोजगारी खोसिने उनको चिन्ता छ ।
हातले तुइन सार्दा बारम्बार फलामको टुक्राले काट्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘तुइनबाट खोला तर्दा फलामका टुक्राले धेरैपटक हात काटेको छ, जाडोमा त धेरै दुख्छ,’ उनले भने ।,खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
धादिङको चरौँदीस्थित साबिकको गाविस भवनसँगै रहेको तुइन अघिल्लो वर्ष नै विस्थापित गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, एक वर्ष ढिला भइसक्दा पनि निर्माण कार्यले गति लिएको छैन । त्रिशूली नदीमाथि रहेको तुइनको दायाँ किनारा गोरखाको घ्याल्चोक र बायाँ किनारा धादिङमा पर्छ । तुइनको छेवैमा तरकारी संकलन केन्द्र छ । त्यहाँ घ्याल्चोकलगायत आसपासका किसान दैनिक तुइन तरेर तरकारी बिक्री गर्न आउने गर्छन् ।
जाजरकोटमा पनि उस्तै
जाजरकोट-डोल्पा सडकखण्ड अन्तरर्गत डोल्पाको त्रिपुराकोट-५ खदाङस्थित भेरी नदीमा तुईनमार्फत यातायातका साधन तार्दै स्थानीय तस्बिर : हेमन्त केसी, रासस ।
२०७२ असोजमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरबाट तुइन हटाउने निर्णय गरेको थियो। ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष हुन लाग्यो तर देशका अधिकांश ठाउँमा तुइन हट्न सकेको छैन। ओली दोस्रो पटक २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्।
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार को दिन प्रकाशित